Rikoooo.com - How to make an ILS landing in FSX ya na PA380
Etu ị ga-esi mee ka ala ILS banye FSX ya na PA380
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by JanneAir15 » 22 Mar 2017, 13:25 am
Nnọọ! Ya mere, m ga - achọ ịma ka esi eme ka ala ILS banye FSX ya na Project Airbus A380. Amatalarị m otu esi eme njem ILS n'ime ụgbọ elu ndị ọzọ mana n'ihi na nnuku pipụ Project Airbus dị iche na enweghị m obi abụọ. Agbalịrị m ime ka ụgbọ elu ILS daa n'ụgbọelu ahụ ma ọ nweghị isi. N'agbanyeghị m nọ na mebere kokpiiti. Enwere bọtịnụ dị iche iche? Thegbọ elu ahụ bụkwa Air France A380 VC site na saịtị a. Biko nyere m aka na nke a.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 22 Mar 2017, 20:51 am
N'eziokwu, m na-akasị #FlyBoeing ụbọchị ndị a (na DC-10 na Concorde ịbụ isi ihe abụọ wezụga akpa ọchị), ma m maara na ị chọrọ ikpo na ILS Freq n'ime Nav1, na mgbe ịgbanwe si GPS ka Nav (m na-emekarị nwere a na-ekpo ọkụ igodo na, na ikpe m CTRL Mgbanwe N). M na na na maara na Airbus ma m maara na 747 (nke bụ ihe m na-akasị ofufe n'ihi na ọ na-eme ka ndị kasị $), ị na-enwe họrọ APP (obibia) inweta ya ka igbachi na ILS. Ọ ga-adịghị igbachi ka a ife efe mkpọda, otú ahụ ka m enwere ime na aka, ma nke ahụ bụ nnọọ a okwu nke ukpụhọde vert ọsọ.
Enwere m Olileanya a na-enyere! JISIE IKE!